Tarisa yako Yemukati Zvekuita neGoogle Tsvaga Console | Martech Zone
China, Kurume 5, 2009 China, Gumiguru 23, 2014 Douglas Karr
Vanhu vazhinji vanoziva nezvazvo Google Search Console yekutumira saiti uye kuongorora marobhoti mafaera, Sitemaps uye indexing. Vanhu vasina kukwana vanoshandisa nhamba dzekutsvaga kuti vawane zano rakajeka rezvinhu zvavo zvesaiti, zvakadaro.
Enda kune Statistics> Yepamusoro Kutsvaga Mibvunzo uye iwe unowana inonakidza dhata gridhi:
Kurutivi rwekuruboshwe kweiyo grid ndiyo Top Kutsvaga Mibvunzo Yako blog. Uku kurondedzerwa kwemashoko epamusoro kana mitsara pamwe nenzvimbo yepositi yako kana peji mune mhedzisiro.
Kudivi rerudyi kweiyo grid ndiwo mazwi chaiwo aive kudzvanya-kuburikidza kuenderera pamwe nechavo-cheki-kuburikidza rate (CTR). Aya ndiwo akakosha ruzivo!
Ndiwo here mazwi akakosha aunoshuvira kuti kambani yako, saiti kana blog iratidzirwe? Kana zvisiri, ungangoda kufunga zvekare zvemukati uye wotanga kunanga zvakanyanya.
Kana iwe ukaiswa mushe pane mamwe mazwi akakosha asi ako ekudzvanya-kuburikidza stats haana kunyatsonaka, unofanirwa kushanda pane ako ePost Titles uye post zvinyorwa uye meta tsananguro). Izvi zvinoreva kuti hauna mazita ekumanikidza uye zvemukati - vanhu vari kuona yako link asi vasingabatike pairi.
Kugadzwa zvakanaka mumhedzisiro yekutsvaga haisi kupera kwebasa rako. Kuona kuti zvinyorwa zvako zvakanyorwa mushe zvekuti vanhu vanodzvanya pazviri zvinotonyanya kukosha!
Tags: Content Marketinggoogle webmastersmapeji epamusoropamusoro pekutsvaga mibvunzoWebmaster
Iwe Unofanirwa Kuva Mune Ino Yekutsvaga Injini Mhedzisiro
Mar 5, 2009 pa 5: 03 PM
Ndingadai ndakada kuti iwe wakapinda kune rumwe ruzivo nezve mashandisiro eiyo ruzivo. Rubatsiro rweGW haruna zvese zvinobatsira.